Mampivoatra ny any ambanivohitra ny WeLight | NewsMada
Miezaka mampivoatra ny famatsiana herinaratra any ambanivohitra ny orinasa WeLight Madagascar, araka ny tontolo manodidina mampiavaka an’ilay tanàna. Jerena avokoa, ohatra, ao amin’ny tanàna iray ny isan’ny mponina, ny tsy fahazoan’izy ireo herinaratra, sy ny tetibola ankapobeny isam-pianakaviana.
Atao maharitra ny fotodrafitrasa apetraka, indrindra any amin’ireo kaominina ambanivohitra lavitra sady ratsy lalana. Miainga avy amin’izany ny famolavolan’ny WeLight ny vidin’ny angovo, araka izay zakan’ny isam-pianakaviana, ka aloa mialoha ny vidin’ny herinaratra amin’ny alalan’ny « compteur prépayés ». Maherin’ny tokontrano 600 sy asa fihariana maro, toy ny asa tanana, fanodinam-bokatra avy amin’ny fambolena no mahazo tombontsoa amin’izao tetikasa izao. Manohana sehatra maro ny WeLight, ankoatra ny fihariana, eo indrindra koa ny fanampiana ny fampianarana, ny fitsaboana.
Patmad : Fikambanana najoro araka ny lalàna malagasy, manana toeram-piasana Tsiky eto an-dRenivohitra sy fanahazana voankazo any Ampefy. Manolotra vahaolana ho fanavaozana nanomboka ny 2004, ho fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana any ambanivohitra . Ireo mpiasa ao amin‘ny Tsiky, ohatra, nomena fiofanana sy nampian’ny manam-pahaizana Suisse avy ao amin’ny CEAS, momba ny fanamboarana milina manodina herinaratra avy amin’ny rano. I Dama ao amin’ny tarika Mahaleo no mitarika azy.
CEAS : ONG Suisse miasa eto Madagasikara nanomboka ny taona 1982. Manampy betsaka amin’ny fanodinam-bokatra avy amin’ny fambolena sy ny famokarana herinaratra azo havaozina izy izao.
Aider : Fikambanan’ny injeniera miasa ho amin’ny fitrandrahana angovo azo havaozina avy amin’ny rano, nanomboka ny taona 2004.
Anaran’ny foibe famokarana : Andriamamovoka
Toerana : Fialofa, Sarobaratra – Miarinarivo Itasy,
22 km avy eo Analavory
Isan’ny mponina : 2797 , tokantrano 642
Herin’ny angovo : 2 x 50 KW (100 KW)
Azon’ny tokantrano alaina : 12 V, 220 V, 400 V